प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारले प्रयोग गर्ने भाषाका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । अंग्रेजी भाषाको प्रभावबाट आफ्नो भाषा बिर्सिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका ओलीले दशक अघिसम्म राजा र राजपरिवारका विषयमा कस्तो भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो भन्दै प्रश्न उठाए । “हिजो राजतन्त्र हुँदा, राजा हुँदा, राजाका श्रीमती छोराछोरी हुँदा कसरी बोल्थ्यौँ ?,” ओलीले पत्रकारको भाषामा प्रश्न उठाउँदै भने, “ खानुभयो भन्दा खाइबक्स्यो भन्नुपथ्र्यो, हिड्नुभो भन्दा हिँडिबक्स्यो भन्नुपर्थ्यो । आज आएर खानुभयो हिँड्नुभयो भन्न पनि गाह्रो ?”
उनले भाषाका कारण सभ्यता नै भूलेको बताए । “अंग्रेजीमा सबैलाई यू भनिन्छ, त्यही सिकेर तपाईंहरुले पनि तिमी भन्न थाल्नुभयो,” ओलीले भने, “हाम्रो चराको परिवार जस्तो होइन । चराले त दुइटा फूलपार्छ भुर्र उठ्छ । त्यसपछि आमाबाबु पनि चिन्दैन ।” उनले आमा बुबा हजुरबा हजुरआमासहितका अग्रजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै त्यसलाई अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरे ।
“हामी आमा बुबा, हजुरबुवा हजुरआमा सबैलाई आदर सम्मान गर्छौँ, खुट्टामा ढोग्ने हामो चलन छ,” ओलीले भने, “बिहानै उठेर बुवा आमालाई खुट्टामा ढोग्दा रोग लागेर मर्‍यो भनेको कतै सुन्नुभएको छ ?” उनले भने, “हेल्लो, हाउआर यू भन्यो, सकियो । बाले हेरे ! आमा पनि ति थिइन् हेरिन् !” ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालको ‘प्रेम’ लाई सिनेमाको जस्तो नक्कली प्रेमको संज्ञा दिएका छन्। बिहीबार आफू निकट पत्रकार प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालको नाम नलिइ उनीहरुको प्रेमलाई सिनेमाको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘समाजमा विभिन्न प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न हाउभाउ गर्छन्। जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सिनेमामा हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ। हिरोइनलाई चोट लाग्छ, हिरो भावुक हुन्छ, विलौना गर्छ। तर वास्तवमा त्यो केहीपनि हुँदैन।’
पछिल्ला बैठकहरुमा प्रचण्डले माधव नेपालको प्रसंसा गर्न थालेका छन्, त्यहीतर्फ संकेत गर्दै उनीहरुको ‘प्रेम’लाई नक्कली प्रेमको संज्ञा दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही मानिस नाटक देखाउने, रुने र जनतालाई झुक्याउन तल्लिन भएको भन्दै त्यस्ता तत्वबाट जनतालाई सचेत गराउन आग्रह गरे।
‘हामी कुनै आवेश, उत्तेजना, आक्रोश, प्रतिशोधमा छैनौं। हामी रातो झण्डा फहराउनेहरु हौं। पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झण्डा फहराउने होइनौं,’ उनले भने, ‘हामी सडकमा हिँड्दा रातो झण्डा बोकेर हिँड्नेवाला हौं कालो झण्डा बोक्ने होइनौं। हाम्रो गन्तव्य कालो र अन्धकार होइन। हामीलाई देश बनाउनुछ। सुशासनको बाटोमा लैजानु छ, भ्रष्टाचार नियनन्त्रण गर्दै समाप्त पार्नुपर्नेछ। हामी हाम्रो बाटोमा स्पष्ट छौं।’
अ‍ोलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारवाद भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रेस संगठनको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले जनयुद्ध लडेका परिवारलाई प्रचण्डले बिचल्ली बनाएको आरोप लगाए ।
‘केपी ओलीका छोराछोरी छैनन् । मेरा त छोरी ज्वाई छन् बनाउनै परो । मेयर बनाउन भोट पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै परो । बहादुर हो । बाउ सुसरो यस्तो पो होस् । मेरा आफ्नै केटाकेटी छैनन् । देशका सबै केटाकेटीका लागि म काम गर्दैछु’, उनले भने, ‘उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनेहरूका छोराछोरी, ज्वाई नाती नातिना छन् छैनन् ? अरुका पनि छोराछोरी छन् नि । अरुका छोराछोरी काठले बनाएको हो ? अरुका छोराछोरी पसलमा खेलाउने पुतलीबाट बनेका हुन् ? अरुलाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? काला सपना कालो मनशाय लिनु भएको छ ।’
त्यस्तै उनले नेपालमा सांसद किनबेचको क्रम सुरु भएको बताए । उनले देशमा खास लडाई सुरु भएको बताउँदै आफूले देश विकासका लागि जोडेको पार्टी हुतिहार भएको बताए । ‘देश खास लडाईमा छ । संसदलाई सांसद किनबेचको सिलशीला सुरु भएको छ । मैले सुरु गरेको थिएँ । दुई पार्टी जोडेर मैले देशको रक्षा, स्वाधिनताको रक्षा गरोस् र देशको विकासमा सर्मपित होस् । अरुले पनि आहा भन्ने देश भनो् भन्ने परिकल्पना गरेको थिएँ । एउटा कामको पनि तारिफ नगर्ने पार्टी र हुतिहारा पार्टी बनेछ’, उनले भने ।